Zvese Zvaunoda Kuti Uzive Nezve Kufamba MuEurope | Save A Train
musha > Travel Europe > Zvese Zvaunoda Kuti Uzive Nezve Kufamba MuEurope
kubudikidza Ela Williams
Ngatiti uri kuronga kushanyira European Union chero nguva munguva pfupi. Kana zvakadaro, pane akateedzana matipi uye ruzivo rwakakosha rwekufamba izvo zvinobatsira kuita kuti ruzivo rwako rwunakidze zvakanyanya. Mumwe anogona kufunga kuti hakugone kuve nemusiyano mukuru muiyo kufunga kwakakosha kuenda kuEurope tichienzanisa nechero imwe nzvimbo pasi. Still, mukati mekuwedzera kukuru kwayo, pane akateedzana mapepa epamutemo aungade kuti upinde muEurope semushanyi. wo, mamiriro ekunze akasiyana kwazvo, quirks, uye tsika tsika zvakakosha kuti uchengete mupfungwa ipapo.
1. Kuenda KuEurope: Bata Kubata Pasipoti Yako
Pasipoti ndiyo inonyanya kunetsekana nekuti ichave kadhi rako rekuratidzira uye kiyi yenyika yako yekutambira. Tichatanga tachengeta pasipoti kutanga. Hurumende yako yekumberi inosarudza idzo nyika dzauchazokwanisa kupinda mariri usingatorese chero mhando yemapepa akakosha. Nguva dzose zvinonyanya kukosha kutarisa kana mamishinari epamba nekukwauri akasimbisa hukama kana chibvumirano panguva yaunofamba. Nyika zhinji kubva kuAmerica nekuSoutheast Asia hadzina kudzora kupinda kune dzakawanda dzenyika muEurope.
Ndataura izvi, kana zvisiri izvo; tora wezvepamutemo rwendo chipangamazano uyo anogona kukutungamira iwe uchigadzirisa ako mafambiro mvumo. Iwe unogona zvakare kuda zvitupa zvehutano uye zvakadaro kupihwa mukana. Kana uchida kutyaira uchiri kunze kwenyika, iwe zvakare uchada iyo mvumo yekutyaira yepasi rese. Kana iwe ukaronga kuita bhizinesi, panogona kunge paine zvimwe zvibvumirano zvepasi rese zvinodiwa kuti ufambe. Iwe unogona kutarisa kuti ndeapi mapepa anodikanwa maererano nechinangwa chako chekufamba pawebhusaiti inogamuchira yenyika.
Lyon kuenda Toulouse Nechitima
Paris kuenda Toulouse Nechitima
Nice to Toulouse Nechitima
Bordeaux kuenda kuTououse Ine Chitima
2. Dzidza Kurongedza Zvakakodzera
Europe inyika huru uye dzakasiyana, kubva kumahombekombe ane zuva eAndalucia muSpain kusvika kune chando chekumabvazuva kweTundra. Izvo zvakakosha kurongedza nemamiriro ekunze mupfungwa uye zviitiko iwe zvauchange uchironga kuita kunze kwenyika. Rangarira kuti hausi kurongedza kuti ubude kunze kwenyika yako, usatora zvakawandisa kana zvishoma; izvi zvinoita kuti urasikirwe nenguva shoma yekunhonga mbatya, akubatsire munzira yekuenda kunhandare yendege, uye kunyange ndikuponese mari kubudikidza kudzivisa mubhadharo wekuwedzeredza. Zvakanakisa kuronga bhegi rako rekufamba kana sutukesi wemauto, kumonera bhurugwa rako, hembe, masokisi, uye mbatya dzemukati kunge croissant woisa dzese dzakakora dzichipesana. Izvi zvinodzivirira kunetswa kwekupeta mbatya dzako uye zvinokuchengetera nzvimbo kuti ukwane zvigadzirwa zvehutsanana kana zvemagetsi. Zano iri rinobatsirawo kana iwe uri kutsvaga kuunza mbatya dzawakatenga parwendo. Chimwe chidimbu chakanaka chezano kurongedza bhegi rekuwedzera rechipo chako kana zvekutenga zvinhu.
3. Kuenda KuEurope: Rega Mabhangi Ako Aziva Iwe Uchave Kunze Uye Kunze
Kadhi rechikwereti rekubira rampage iro rakaitika makore mashoma apfuura rakaita kuti mabhanga anyanye kungwarira nezve njodzi iyi. Izvo zvakavatungamira kuti vatange bhuroka kutanga vabvunza gare gare mutemo kana ivo vaona kiredhiti kadhi iri kushandiswa mune yakasarudzika nyika. Iwe unofanirwa kuratidzira uri-munhu kubhangi rako kana kuvapa runhare sezvo ziviso zvepamhepo dzimwe nguva zvisingatorerwe. Kutora iyi gadziriro kunodzivirira zviitiko zvinokuvadza uye zvinonyadzisa panguva yekutenga. Ukaenda kubhangi zvakare zano rakanaka kuti uwane mari yemuno iwe uripo. Mari dzekuchinjana dzakazara mweya kune vashanyi mune mazhinji ezvitoro zveEurope uye kuchinjana pfungwa.
4. Kuenda KuEurope: Kudzokorora
Kana iwe uchienda ku "Old Continent,”Yeuka kuunza zvinyorwa zvako newe uye ubhadhare chero mhando yemvumo yepasi rose inodiwa. Rudzi urwu rwe mapepa rinokosha kana iwe ukaronga kushanyira nyika dzakasiyana mukati mutemo weEuropean. Kana iwe uri kuronga rwendo rwemugwagwa, zvinodikanwa kuve nemvumo yekutyaira yepasi rese uye kudzivirira kunyoresa. wo, rangarira ku kurongedza zvishoma uye kufunga mamiriro ekunze uye zviitiko zvaunotsungirira kunze kwenyika. Gara uchitaura kuti inyika dzipi dzaunoronga kushandisa mari pazviri uye nekuita shanduko dzemari chete nemasangano anotenderwa. Pakupedzisira, urikusangana nevanhu vakasiyana, zvokudya, tsika, usakanganwa kunakidzwa uye kunakidzwa neruzivo.
Zvino iwe unoziva zvese zvaunoda kuti uzive, isu pa Save A Train, takagadzirira kukubatsira iwe nezvimwe zvako zvese zvido zvechitima.
Unoda embed yedu Blog pambiru "Zvese Zvaunoda Kuti Uzive Nezve Kufamba MuEurope" kune yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feverything-know-traveling-europe%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kushandura / ja kuti / on kana / of uye mimwe mitauro.
EuropeanUnion eurotrip ruzivo TravelingToEurope traveltips
Ela mumiriri wekufamba. Kuda kwake kwekufamba kwakasimuka paakanga achiri mudiki saka, akava mumiriri wekufamba kuti akwanise kupa ruzivo, zano, uye kubhuka masevhisi kune vanhu vanoda kufamba. Munguva yake yekusununguka, anoda kuverenga uye kunyanya avo vari nyaya dzinoenderana-nezvekufamba. Mufaro wake nekutenda kwekufamba kwakaita kuti atange kunyora nezve zvaakasangana nazvo nenzira yaanogona kubatsira vamwe vanofarira zvekufamba - Unogona baya pano Bata Rebecca
Chitima Kufamba, Rovedza Kufamba Britain, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Italia, Chitima Kufamba Luxembourg, Train Travel The Netherlands, Rovedza Kufamba Matipi, Travel Europe